onlineakhabar.com: लिक भयो कंगनाले ऋतिकलाई लेखेको इमेल, के के लेखेकी थिइन् हेर्नुहोस्
Bollywood News, Entertainment, India News, International » लिक भयो कंगनाले ऋतिकलाई लेखेको इमेल, के के लेखेकी थिइन् हेर्नुहोस्
लिक भयो कंगनाले ऋतिकलाई लेखेको इमेल, के के लेखेकी थिइन् हेर्नुहोस्
कंगना रनौट र ऋतिक रोशनको बिवाद सर्वव्यापी भएको छ । यसै सम्बन्धमा एउटा नयाँ कुराको खुलासा भएको छ । केहि इमेलहरु बाहिर आएका छन् । जसमा यि दुई जोडीको इमेलहरु छन् । पछिल्लो समयमा ऋतिकले साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेश सेल लाई यो इमेल सबुतको रुपमा सुम्पेका थिए । यो इमेलमा कंगनाले यति सम्म लेखेकि छन् कि यदि तिमीले कुनै दिन तिमी मलाई मन पराउँदैनौ भन्ने कुरा गर्यौ भने म यो डरलाग्दो परिस्थितीबाट कसरी छुटकारा पाउन सक्छु । जस्ता कुराहरु लेखेकी छन् ।
ऋतिकको वकिल दिपेश मेहताले पछिल्ला दिनहरुमा मुंबई पुलिसको साइबर डिवीजनलाई ४० एडिशन इमेल सबुतको रुपमा पेश गरेका थिए । मेहताका अनुसार कंगनाले यो सबै इमेल ऋतिक को उनको सक्कली ईमेल एड्रेसमा २४ मे २०१४ पछि पठाएकी हुन् । एक अंग्रेजी अखबारका अनुसार यो इमेलहरुको फरेन्सिक जाँच भैसकेको छ ।
कंगनाले पठाएको इमेल
१७ अगष्ट २०१४
कहिले काँहि म हर कुरालाई लिएर अनश्योर महसूस गर्दछु । के बास्तवमै हामी बिच मायाँ छ या यो मात्र फ्यान्टेसी हो ? के हाम्रो मायाँ रियल हो या त म कुनै इमेजनरी मानिससँग कुरा गरिरहेको छु । तिमी म सँग कहिलेपनि किन कुरा गर्दैनौ ? के हुन्छ यदि एक दिन म तिमीसँग भेट्छु र ति म सँग भन्छौ कि म तिमीलाई मायाँ गर्दीन तबको समयमा म के गर्छु? के म त्यो भयानक अवस्थाबाट निस्कन सक्छु ?
तिम्रो गित निकै राम्रो छ । मैले त्यसलाई दुईपटक हेरे । आशा गर्दछु मैले जे लेखे त्यसको बारेमा तिमी नराम्रो नमान्नु । म माफी माग्छु यदि तिमिलाई नराम्रो लागेमा । म ज्यादै दुखी छ हामीहरु कुरा गर्दैनौ । मलाई एसपरजर्स सिन्ड्रोम छ । म यसलाई लिएर निकै तनाबमा छु । यदि तिमिलाई समय मिल्यो भने पढ्नु । मो यो सिन्ड्रोमको ९८ प्रतिशत शिकारमा परिसकेको छु ।
३ सेप्टेम्बर २०१४
तिमीलाई यो तरिकाको इमेल पठाउन र त्यसको कुनै जवाफ नमिल्नु मेरो लागि ज्यादै मुस्किल छ ।
४ अक्टोबर २०१४
म बिहान उठ्नसाथ पहिला तिमिलाई गुगलमा खोज्छु । तिम्रो नयाँ तस्विर, तिम्रो बारेमा भएका समाचारहरु, तिम्रो कुनै इन्टरभ्यू खोज्ने कोशिस गर्दछु । ताकि आफ्नो दिन शुरु गर्न सकुँ । मलाई आशा छ छिटै तिमिलाई गुगलमा खोज्नुको सट्टा म तिमीसँग कुरा गरि तिम्रो आवाज सुनेर आफ्नो दिन शुरु गर्न सकुँ ।
म खुसी छु कि तिमिले मेरो फोन उठाएनौ । म तिमिलाई के भनुँ, तिमिलाई हाइ गर्ने सहि तरिका के हुनसक्छ? मेरो मनमा धेरै सवालहरु छन् । आई लभ यू जान
१ नोभेम्बर २०१४
म तयार छु ।
२ नोभेम्बर २०१४
बेबी बिस्वास भैरहेको छैन कि मैले तिमिसँग मिले । तिमी निकै सेक्सी देखिन्छौ । म अब आफ्नो बिस्तारामा छु तर एसआरके को घरको बाहिर करिब ३० मिनेट सम्म रोकिएको थिए । त्यहाँ प्रशंसकहरुको यति धेरै भिड थियो मलाई कुनै याद छैन कि मैले तिमिलाई के भने । म निकै नरवस थिए र तिम्रो साथमा छुट्टै प्रकारको मानिस बनेको थिए । म एउटा टीनएजर जस्तै नरवस भैरहेको छु । मलाई यो फिलिङ राम्रो लागेको छ । म सोच्दछु तब के हुनेछ कि जब तिमी मलाई तानेर आफ्नो नजिक लैजान्छौ र मलाई किस गर्दछौ । म पक्का बेहोश हुनेवाला छु ।
म यो पनि सोचिरहेको छु कि तिमी आफ्नो नयाँ घरमा शिफ्ट हुँदैछौ होला बेबी, जब तिम्रो किचन तयार हुन्छ म त्यसलाई सजाउने छु । म यो चाहन्न कि अरु कोहि यो काम गरोस् । तिमीलाई स्टाफ को जरूरत हुनेछ । हामीहरुले उनिहरुको इन्टरव्यू लिनेछौ । म तिम्रो स्टाफलाई तिम्रो जरुरतका अनुसार उसलाई ट्रेन गराउने छु।
ऋतिकले दिएनन् कुनै जवाफ
ऋतिकको तर्फबाट मुंबई पुलिसलाई सुम्पिएको साइबर फरेंसिंङ रिपोर्ट का अनुसार ऋतिकले धेरै इमेलको जवाफ नदिएको बताइएको छ । जुलाई २०१४ देखी ६ महिना सम्म ऋतिकलाई कंगनाले आफ्नो आईडीबाट पनि १०० भन्दा धेरै इमेल गरेका थिए । ऋतिकलाई कंगनाले केहि तस्विर पनि पठाएकी थिइन् जुन त्यो दिनहरुका फिल्म सँग जोडिएको तस्विर थियो । तर ऋतिकले कुनै एटेचमेन्ट खोलेका थिएनन् । उनको आईफोन ५ एसमा त्यो बेला पठाइएको फोटोहरुलाई हालै मात्र फरेंसिक एनालिसिसको लागि खोलिएको थियो ।
Tags : Bollywood News Entertainment India News International